Gcina ibhethri kuselula. Landa i-Battery Doctor | Kusuka kuLinux
Gcina ibhethri kuselula. Landa i-Battery Doctor
Sonke sikulesi simo, sibona ukuthi isithonjana se- ibhethri lefoni yethu Uzulazula phakathi kwethoni yokuxwayisa ephuzi kanye nekholi ephuthumayo ebomvu ebomvu. Okwesibili sibona umbala okhombisa ukuthi icala lizophela, siphelelwa ithemba ukuthola ishaja.
1 Gcina ibhethri kuselula. Landa i-Battery Doctor
2 Uyini uDokotela webhethri?
Ungakhetha ukuqhubeka ukhuthazelele lezi zinhlobo zezimo ezimbi kakhulu, noma ungayeka ukungezwani ngokuphelele bese ubamba uhlelo lokusebenza. Udokotela webhethri.
Uyini uDokotela webhethri?
I-Battery Doctor uhlelo lokusebenza olulula lokusebenzisa kepha olusiza indlela ye- ukuhlaziywa okuphelele mayelana nokusetshenziswa kwe- ibhethri lefoni yakho. Isici esisodwa esibaluleke kakhulu ukuthi uhlelo lokusebenza lunikeza ukulinganiselwa kwempilo yebhethri esele ngokuya ngezindlela ezahlukahlukene ozisebenzisa ngayo ifoni yakho.
Ngabe uhlala ubukela amavidiyo kuvuliwe -YouTube? Uhlelo lokusebenza luzokutshela isikhathi ongaqhubeka ngaso ukubuka lawo mavidiyo ngezinga olikhuphukayo. Noma ungasebenzisi noma yiluphi uhlelo lokusebenza, Udokotela webhethri Izokutshela ukuthi isele isikhathi esingakanani kuze kufe ibhethri.
IBattery Doctor ibala ukuthi zingaki izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswayo njengamanje kanye nesikhathi namandla okusebenzisa. Zikunikeza nemibono yokuthi ungayisebenzisa kanjani ibhethri lakho ngokuphatha izilungiselelo.
Izinketho zifaka phakathi ukwenziwa kungasebenzi de I-Wi-Fi noma i-GPS, ukulungiswa kokukhanya namandla okucishiwe Bluetooth. Udokotela webhethri uzokutshela ukuthi lezi zinketho zizolula impilo yakho isikhathi esingakanani.
Uhlelo lokusebenza lukhombisa nokuthi yini ekhokhisiwe kumalogi ayo amashaji - ibhethri lidlule kangaki kumjikelezo ogcwele noma oyingxenye, nokuthi kangaki. UBattery Doctor uthi empeleni ufuna ukushaja ifoni yakho noma nini lapho amandla ayo engaphansi kuka-100% nangaphezulu kuka-20%.
Uhlelo lokusebenza lungaphezu kokunikeza amathiphu nezici ezilula zokonga ibhethri. Uzofunda futhi nge- CPU futhi i ukusetshenziswa kwememori, i-Wi-Fi nolwazi lwe- Inethiwekhi Yeselula, uhlelo lokuphathwa kwediski kanye Imininingwane yehadiwe zocingo. Ungasetha futhi izikhumbuzi zokushaja, ngakho-ke kukhona ukwaziswa okukhumbuza ukuthi uxhume ibhethri.
Into eyodwa esiyithandayo ngohlobo lwe Android Kuyinto iwijethi ongayengeza esikrinini sasekhaya sefoni yakho. Ngalo, yonke imininingwane yebhethri nokumiswa kwefayela lakho le- smartphone kulula kakhulu futhi kuyashesha ukufinyelela.
Uma ukhathazekile ngokwelula impilo yebhethri lakho le-smartphone, kufanelekile ukubheka iBattery Doctor, uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokulufeza.
Futhi wena, ngabe unendaba ne ibhethri lakho le-smartphone? Khumbula ukuthi kuyisihluthulelo ukugcina imikhuba enempilo ukuze isebenze ngendlela enhle isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Uma ungomunye wethu, unganqikazi ukushiya imibono yakho nezincomo zakho ku gcina ibhethri nge-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Gcina ibhethri kuselula. Landa i-Battery Doctor
Kukhishwe iDebian 8 Jessie
Ukubuyela ku-distro yendabuko evela ekukhululweni okukhiphayo